Sciences soLuntu Qoqosho
Umdlalo wemihlangano ngumzekelo oqhelekileyo womdlalo womntu omabini wokusebenzisana okucwangcisiweyo , kwaye ngumzekelo wokuqala oqhelekileyo kwiincwadi ezininzi zezifundo ze- theory . Ingqiqo yomdlalo ilandelayo:
Abadlali ababini kumdlalo bazama ukudibana kunye kodwa baye balahlekelwa iifowuni zabo kwaye abakwazi ukukhumbula apho bavumile ukudibana khona.
Umdlali ngamnye unquma ngokuzimela nokuba uya ku-opera okanye kumdlalo webhola.
Ngenxa yokuba ngamnye kumdlali omabini uneendlela ezimbini zokukhetha (izicwangciso), kukho iziphumo ezine ezenzeka kumdlalo.
Ukuba ngaba ababini abadlali bakhetha isiganeko esifanayo, bahlangana kwaye ngamnye ufumana umphumo omuhle. (Iimpawu ezizodwa zeziphumo azichaphazeli kwaye akufanele zifane kunye nemicimbi okanye kubantu.)
Ukuba omnye umdlali ukhetha isiganeko esinye kwaye omnye ukhetha omnye umcimbi, abahluleka ukudibana kunye kwaye bobabini bafumana ukuhlawula i-zero. (Ngokwenene, ukuhlawula akufuneki kube yinto, kodwa kufuneka kube ngaphantsi kweendlela ukuba bakwazi ukuhlangabezana nayo nayiphi na isiganeko.)
Kulo mdlalo ngokwawo, imivuzo imelwe ngamanani enkonzo . Inani elihle limela iziphumo ezilungileyo, iinombolo ezimbi zimelela iziphumo ezimbi, kwaye esinye isiphumo singcono kunomnye ukuba inani elinxulumene nalo likhulu. (Qaphela, nangona kunjalo, oku kusebenza njani kumanani amaninzi, ukususela--5, umzekelo, mkhulu kune -20!)
Kule tafile ngasentla, inombolo yokuqala kwibhokisi nganye ibhekisela kwisiphumo somdlali 1 kunye nenani lesibini limela umphumo kumdlali 2. La manani amele nje enye yeeseti ezininzi zamanani ezihambelana nokusekwa kwemidlalo yokuhlangana.
Ukuhlalutya Iindlela zokudlala
Emva kokuba umdlalo uchazwa, isinyathelo esilandelayo ekuhlalutheni umdlalo kukuhlola izicwangciso zabadlali kwaye uzama ukuqonda indlela abadlali abanokuziphatha ngayo. AbaSomnotho benza iingcamango ezimbalwa xa behlaziya imidlalo-kuqala, bacinga ukuba abadlali bobabini bayazi ukuba bazibophelela bona kunye nomnye umdlali, kwaye okwesibini, bacinga ukuba abadlali bobabini bafuna ukunyusa umvuzo wabo umdlalo.
Enye indlela yokuqala elula kukujonga izinto ezibizwa ngokuba ziqhinga eziphambili - izicwangciso ezifanelekileyo kungakhathaliseki ukuba yintoni isicwangciso esinye umdlali esikhethayo. Ngokomzekelo ongentla, kunjalo, akukho zicwangciso eziphambili kubadlali:
I-Opera ilungele umdlali 1 ukuba umdlali 2 ukhetha i-opera ukususela ngo-5 ungcono kune-0.
Ibhola lingcono kumdlali 1 ukuba umdlali 2 ukhetha i-baseball ukususela kwi-10 ingcono kune-0.
I-Opera ingcono kumdlali 2 ukuba umdlali 1 ukhetha i-opera ukususela ngo-5 ungcono kune-0.
Ibhola lingcono kumdlali 2 ukuba umdlali 1 ukhetha i-baseball ukususela kwi-10 ingcono kune-0.
Ngenxa yokuba oko kukuhle kumdlali omnye kuxhomekeke kwinto enye umdlali akwenzayo, akumangalisi ukuba umphumo wokulingana womdlalo awufumaneki ngokujonga nje iqhinga eliphambili kubalweli bobabini. Ngako oko, kubalulekile ukuba kube ngakumbi ngokucacileyo kunye nencazelo yesiphumo somlinganiso womdlalo.
Ingcamango ye- Nash Equilibrium yaqulunqwa ngumbalo kunye nomdlalo wezemidlalo uJohan Nash. Ukubeka nje, i-Nash Equilibrium isethi yeendlela zokuphendula kakuhle. Umdlalo womdlali omibini, umlinganiso we-Nash ngumphumo apho isicwangciso sesiqhelo sesi-2 sisona siphumo esiphezulu kwisicwangciso somdlali 1 kunye nesicwangciso somdlali 1 isiphumo esiphezulu kwisicwangciso sesidlali sesi-2.
Ukufumana ukulingana kwe-Nash ngolu mgaqo kunokubonakaliswa kwitheyibhile yeziphumo. Kule mzekelo, umdlali 2 uphendule kakhulu kumdlali omnye ujikelezwe ngokuluhlaza. Ukuba umdlali 1 ukhetha i-opera, impendulo yomdlali 2 ukukhetha i-opera, kuba u-5 ungcono kune-0. Ukuba umdlali 1 ukhetha i-baseball, impendulo yomdlali 2 ukukhetha i-baseball, ukususela ngo-10 ungcono kune-0. (Qaphela ukuba le ngcamango kufana kakhulu neengcamango ezisetyenziselwa ukuchonga izicwangciso eziphambili.)
Iimpendulo eziphambili zeMdlali 1 zijikelezwe nge-blue. Ukuba umdlali 2 ukhetha i-opera, impendulo yomdlali 1 ukukhetha i-opera, kuba u-5 ungcono kune-0. Ukuba umdlali 2 ukhetha i-baseball, impendulo yomdlali oyintloko 1 ukhetha i-baseball, kuba u-10 ungcono kune-0.
Umlinganiso we-Nash yiphumo apho kukho isangqa esiluhlaza kunye nesangqa esibhakabhaka, kuba oku kubonisa isicwangciso seendlela zokuphendula ezona zilungileyo kubadlali bobabini. Ngokubanzi, kunokwenzeka ukuba ube ne-equalibria ezininzi zeNash okanye akukho nanye (ubuncinci kwizicwangciso ezicocekileyo njengoko kuchaziwe apha). Ngaloo ndlela, sibona ngasentla imeko apho umdlalo unama-multiple equalibria kaNash.
Ukusebenza kweNash Equilibrium
Usenokuba uqaphele ukuba akuwona wonke umlinganiso weNash kulo mzekelo ubonakala ngokugqithiseleyo (ngokukodwa, ngokuba akuyiyo iPareto efanelekileyo), kuba kunokwenzeka ukuba abadlali bobabini bafumana 10 kunokuba ba-5 kodwa abadlali bobabini bafumana ama-5 ngokudibana i-opera. Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba umlinganiso we-Nash unokucingelwa njengesiphumo apho kungekho mdlali unomtsalane wokubambisana (oko kukuthi ngokwakhe) ahluke kwiqhinga elikhokelela kuloo mphumo. Kulo mzekelo ungentla, xa abadlali bebini bekhetha i-opera, akukho mdlali angenza ngcono ngokutshintsha ingqondo yakhe, nangona benokukwenza ngcono xa batshintsha ndawonye.
I-Economists ichaza njani iSityhilelo
Inkcazo ye-Asymptotic Variance kwi-Analysis Statistical
Iimpawu zokuthengisa zeMidlalo yeOlimpiki
Imigaqo yoKhuseleko yeeBhendi phantsi kweenyawo ezili-16
Kukho iindlela ezininzi zokuthi "Ndiyakuthanda" ngesiJamani
Ngaba Abafazi Bayazisola Ukukhipha Isisu?
Landela le Mi nyathelo yokukhanyisa i-Advent Wreath